I-Apple Cancels Elvis Presley Miniseries Ngaphezulu Kweenkampani ze-Weinstein Scandals | Ndisuka mac
I-Apple irhoxisa i-Elvis Presley miniseries ngaphezulu kwehlazo leNkampani ye-Weinstein
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo yayihlasela ezona zikhuselo ziphambili zokuba usomashishini uHarvey Weinstein wagwetywa ngenxa yokuhlukumeza ngokwesondo amashumi eminyaka neenkwenkwezi zaseHollywood. Iindaba zazihlasela ngamandla kwaye oku kuyenzile UApple uza kuphinda acinge ngezivumelwano zakhe neNkampani yeWeinstein.
Abalawuli benkampani beza ngaphambili ukuza kuxela UHarvey Weinstein wayekile ukusebenza kwangoko kwaye ke, mhlawumbi, ukunciphisa kancinci ibhombu yolwazi eye yawa phezu kwabo. Nangona kunjalo, oku akwenziwanga U-Apple uthe "hayi" ekudalweni kwe biopic NguElvis Presley ekwakukuvunyelwene ngayo nenkampani ekuqaleni kwalo nyaka ka-2017.
Ngokukwanjalo, iApple ifuna ukonyusa ukuyilwa komxholo wayo weApple Music. Kwaye i-Elvis Presley miniseries that kusenokwenzeka ukuba yayinezahluko ezisi-8 okanye ezili-10Iye yarhoxiswa ngokwemithombo esondeleyo kuyo. Ngoku, ngalo mzuzu iApple ayihambelani- okanye iphike - ulwazi oluvuzekileyo.
Kwisivumelwano ababesenzile kunye neNkampani yeWeinstein, U-Apple wayenengqondo yokuqhubeka nesaga ye-biopic yabalinganiswa abaziwayo abanjengoMichael Jackson okanye iNkosana yamva nje.. Ukongeza, iNkampani ka-Weinstein ifikelele kwisivumelwano nosapho lwePresley ukuba ikwazi ukusebenzisa yonke ikhathalogu yomculo ka-Elvis ngexesha lokufota, kunye nokusebenzisa indlu yaseGraceland kunye nezinye iipropathi.
Kwelinye icala, ukuphumelela ngakumbi nangakumbi kumxholo wakho, UApple ufuna iApple Music franchise enamandla njengoJames Bond; Fumana uthotho noJennifer Aniston okanye uvelise uthotho kwiMidlalo yokwenene yesitrone Kuwo wonke lo mxholo mtsha uzayo, u-Apple ekuqaleni kwalo nyaka waqesha abaphathi ababini bakwaSony ukuba baqhube icandelo levidiyo lenkonzo yeCupertino.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple irhoxisa i-Elvis Presley miniseries ngaphezulu kwehlazo leNkampani ye-Weinstein
I-Apple iceba ukuvula iziko loncedo lomphuhlisi eParis